Ọfọn ikpe ikpe site ikpo nke enyi m dinaa n'elu larịị 29 welara m na-aga-eme ka a ikpe oku na-asị ya a tricky otu. Na ebumnobi nke imezi 99% nke nkanka na ịkpata 16 000 ihe m na-enwe flashbacks na-echeta ihe mere nke a na-a olulu stop nke ụfọdụ ogologo maka ọtụtụ.
Ya bụghị ike, ya frustratingly ike!
Ma Ọ bụrụ na m nwere ike ime ya otú i nwere ike isi, ya dị nnọọ a okwu nke na-atụ si eche echiche na figuring na n'omume anyị pụta (ha ha m-ada ka m 10th ọkwa onye nkụzi!)
Na-bọmbụ n'aka ekpe ruo nkanka bụ gị na-ebute ụzọ.
Mbụ niile ịkụ niile balloons na nnọọ ekpe ruo mgbe bọmbụ akụrisị waya ngịga, mgbe ịfụ ya elu! a ga-enye gị ụfọdụ ọganihu. Na-arụ ọrụ gị n'ụzọ ndị na ruo mgbe ị belata isi ihe na-akpọchi elu nkume, ma hapụ ha ozugbo isi bụ free. Gbalịa na-azọpụta gị fọdụrụ balloons, ha ga-abịa kemfe anya. Ozugbo ị agbachi ndị dị n'ahịrị nkume na ha spirit gaa n'ime ether i nwere ike na-amalite popping balloons. Ị ga-achọpụta na bursting a balloon ike igbape a ole na ole ngịga na a oge, ma naanị site ịfụ elu n'akụkụ blocks, ị na-agaghị bursting na nkanka n'ime ngịga ma ndị ahụ ndị na-esote ya! Ị na-aga kwa-enweghị isi na ozugbo ị ama esịn na ihuenyo ezu mmalite agbaji mepere ngịga si n'okpuru, chebe dị ka ọtụtụ balloons dị ka o kwere…ha mgbe niile yiri ka abịa kemfe, ma na-na ihuenyo na-akpụ akpụ ala.
Igodo Ị kpọghee ekwt brik
Nke a abụghị a larịị ebe gị Nkea na-ejedebeghị otú kụrụ ya, ma Na-echefu banyere gị firecrackers, na-eji ha eme ihe n'ụzọ amamihe na-echeta na i nwere ike na-amalite ịkpata ọzọ ruo mgbe onye mbụ e gawara. Ọ bụrụ na ị nwere otu na osisi na a dum set elu nke nnukwu n'ịgwa n'ihu ma eleghị anya, dị nnọọ ka ya anya na anya a nta ọzọ. Cheta na ihuenyo wont dobe ala ma ọ bụrụ na e nwere Nkea na nkanka ma ọ bụ balloons ejide ya elu.
Inwe a bọmbụ na ala nwere ike ịbụ nnọọ kemfe!
E nwere ihe ọzọ igodo n'okpuru na firecrackers zuru okè gbapụta ha. Nọgidenụ na ebumnobi n'uche ka ị na-aga, dont-ahụ onwe gị na ala nke na ihuenyo na a licorice ụdị bag of acha nkanka fọdụrụ na echiche 'ebe bụ anu ulo?’ ihe mgbaru ọsọ gị bụ ikpochapụ 99% nke nkanka ….doh! Nke a pụtara na ị nwere ike naanị 1 ekpe! Ịhụ na-agba ọnụ na-ọ bụrụ na ị nwere ike ịzọpụta a bọmbụ n'ihi na ala m na obi sie gị na nke a ga-abịa kemfe, -apụghị izere ezere na ị ga-ejedebe na abụọ blocks…yeah, ka m banyere na-akụda mmụọ?
Filed Under: Enyemaka, level 29 Tagged: level 29